GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Alur American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Ashaninka Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bassa (Cameroon) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Belize Kriol Bengali Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Cubeo Czech Czech Sign Language Dangme Danish Drehu Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik Emberá (Catío) Emberá (Northern) English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guahibo Guambiano Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Inga Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Creole Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kabiye Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kenyan Sign Language Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Krio Kwangali Kwanyama Laotian Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Macushi Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Marshallese Maya Mexican Sign Language Mixtec (Guerrero) Moore Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Páez Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quechua (Huallaga Huánuco) Quechua (Huaylla Wanca) Rapa Nui Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sateré-Mawé Sena Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language Solomon Islands Pidgin South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Torres Strait Creole Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zapotec (Isthmus) Zimbabwe Sign Language Zulu
Mmụọ nsọ dakwasịrị ndị na-eso ụzọ Jizọs na Pentikọst (1-13)
Okwu Pita kwuru (14-36)
Ihe ndị mmadụ mere mgbe Pita kwuchara okwu (37-41)
E mere puku mmadụ atọ baptizim (41)
Ndị Kraịst na-anọkọ, na-erikọ nri, na-ekpekọkwa ekpere (42-47)
2 N’ụbọchị Ememme Pentikọst,+ ndị niile na-eso ụzọ Jizọs zukọrọ otu ebe. 2 Ka ha nọdụrụ ala, na mberede, ha nụrụ ụzụ si n’eluigwe nke dị ka ụzụ oké ifufe. A nụkwara ụzụ a ebe niile n’ụlọ ahụ ha nọ.+ 3 Ha hụkwara ihe ndị dị ka ire ọkụ e kesaara ha, otu dịkwa n’isi onye nke ọ bụla n’ime ha. 4 Ha niile wee jupụta na mmụọ nsọ,+ malite ikwu okwu n’asụsụ dị iche iche, n’ihi na mmụọ nsọ nọ na-enye ha ike ikwu okwu.+ 5 N’oge ahụ, e nwere ndị Juu nọ na Jeruselem, ndị na-atụ egwu Chineke. Ha si ná mba dị iche iche bịa.+ 6 Mgbe ọtụtụ ndị nụrụ ụzụ a, ha gbakọtara, ihe na-emenụ jukwara ha anya, n’ihi na onye ọ bụla nụrụ ka ndị na-eso ụzọ Jizọs na-ekwu okwu n’asụsụ nke ya. 7 N’eziokwu, o juru ha anya, ha asị: “Legodị, ndị a niile na-ekwu okwu bụ ndị Galili.+ 8 Oleezi otú onye ọ bụla n’ime anyị si na-anụ ka ha na-asụ asụsụ ya?* 9 Ndị anyị na ha nọ ebe a bụ ndị Patia, Midia,+ Ịlam,+ Mesopotemia, Judia, Kapadoshia, Pọntọs na ndị si mpaghara Eshia,+ 10 nakwa ndị Frijia, Pamfilia, Ijipt na ndị si mpaghara Libia, nke dị nso na Saịrini, na ndị si Rom bịa, ma ndị Juu ma ndị mba ọzọ na-ekpe okpukpe ndị Juu,*+ 11 ndị Krit, na ndị Arebia. Anyị na-anụ ka ndị na-eso ụzọ Jizọs na-ekwu okwu n’asụsụ anyị banyere ọrụ ebube dị iche iche Chineke rụrụ.” 12 O juru ha niile anya, ha ana-ajụ ibe ha, sị: “Gịnị ka ihe a pụtara?” 13 Ma, ndị ọzọ nọ na-akwa ndị na-eso ụzọ Jizọs emo, na-asị: “Mmanya* na-egbu ha.” 14 Ma, Pita na ndịozi iri na otu ahụ biliri ọtọ,+ Pita ejiri olu dara ụda kwuo, sị: “Ndị Judia na ndị niile bi na Jeruselem, maranụ ihe a, ṅaakwanụ ntị nke ọma n’ihe m na-ekwu. 15 N’eziokwu, ọ bụghị mmanya na-egbu ndị a otú unu chere, n’ihi na ihe a ka bụ awa nke atọ* n’ụbọchị. 16 Kama, ọ bụ ihe Joel buru n’amụma na-emezu n’isi ha. Ọ sịrị: 17 ‘Chineke kwuru, sị, “N’oge ikpeazụ, m ga-awụkwasị mmụọ m n’ahụ́ ụdị mmadụ ọ bụla. Ụmụ unu ndị nwoke na ụmụ unu ndị nwaanyị ga-ebukwa amụma, ụmụ okorobịa unu ga-ahụkwa ọhụụ, ndị agadi nwoke unu ga-arọkwa nrọ.+ 18 N’oge ahụ, m ga-awụkwasịkwa mmụọ m n’ahụ́ ndị ohu m ndị nwoke nakwa n’ahụ́ ndị ohu m ndị nwaanyị, ha ga-ebukwa amụma.+ 19 M ga-eme ihe ndị dị ịtụnanya* n’eluigwe, rụọkwa ọrụ ebube n’ụwa. A ga-ahụ ọbara, ọkụ na anwụrụ ọkụ nke dị ka ìgwè ojii. 20 A ga-eme ka anyanwụ ghọọ ọchịchịrị, meekwa ka ọnwa ghọọ ọbara tupu oké ụbọchị dị ebube nke Jehova* eruo. 21 A ga-azọpụta onye ọ bụla na-akpọku aha Jehova.”’*+ 22 “Ndị Izrel, nụrụnụ ihe a: Unu ma na ọ bụ Chineke zitere Jizọs onye Nazaret. Chineke sikwa n’aka ya rụọ ọrụ ebube ma mee ihe ndị dị ịtụnanya* unu ma gbasara ha.+ 23 E nyefere nwoke a n’aka unu otú Chineke zubere nakwa otú o bu ụzọ mara na a ga-eme ya.+ Ebe unu nyefere ya n’aka ndị na-emebi iwu, ọ bụ unu kpọgidere ya n’osisi, gbuokwa ya.+ 24 Ma Chineke tọpụrụ ya n’agbụ ọnwụ kere ya, kpọlitekwa ya n’ọnwụ,+ n’ihi na ọnwụ enweghị ike ijigide ya.+ 25 Ọ bụ ya mere Devid ji kwuo gbasara ya, sị: ‘M mere ka Jehova* nọrọ n’ihu m mgbe niile. Ebe ọ bụ na ọ nọ m n’aka nri, e nweghị ihe ga-eme ka m daa.* 26 N’ihi ya, obi tọrọ m ụtọ, aṅụrị jukwara m obi ka m na-ekwu okwu. M* ga-enwekwa olileanya, 27 n’ihi na ị gaghị ahapụ m* n’ili,* ị gaghịkwa ekwe ka onye jisiri gị aka ike ree ure.+ 28 I meela ka m mara ụzọ ndụ, ị ga-emekwa ka ọṅụ ju m obi n’ihu gị.’+ 29 “Ụmụnna m, biko, ka m gwa unu hoo haa gbasara nna nna anyị Devid. Ọ nwụrụ, e liekwa ya,+ ili ya dịkwa n’obodo anyị ruo taa. 30 Ọ bụ onye amụma. Ọ makwa na Chineke ṅụụrụ ya iyi na ọ ga-eme ka otu n’ime ụmụ ya* nọdụ ala n’ocheeze ya.+ 31 Ọ ma na a ga-akpọlite Kraịst n’ọnwụ nakwa na a gaghị ahapụ ya n’ili,* anụ ahụ́ ya agaghịkwa ere ure.+ 32 Chineke kpọlitere Jizọs a n’ọnwụ, anyị hụkwara ya.+ 33 A kpọgoro ya n’eluigwe, ya anọrọ n’aka nri Chineke.+ Nna ya nyekwara ya mmụọ nsọ o kwere nkwa na ọ ga-ezite.+ Ọ bụ ya mere o ji wụkwasị anyị mmụọ nsọ dị ka unu na-ahụ ma na-anụ. 34 N’eziokwu, Devid agaghị eluigwe, ma ọ sịrị, ‘Jehova* gwara Onyenwe m, sị: “Nọdụ ala n’aka nri m 35 ruo mgbe m ga-eme ka ndị iro gị bụrụ ihe i ji agbakwasị ụkwụ.”’+ 36 N’ihi ya, ka ndị Izrel niile mara n’eziokwu na Chineke mere ka Jizọs a unu kpọgidere n’osisi+ bụrụ Onyenwe anyị+ na Kraịst.” 37 Mgbe ha nụrụ ihe a, o wutere ha nnọọ, ha wee gwa Pita na ndịozi ndị ọzọ, sị: “Ụmụnna anyị, gịnị ka anyị kwesịrị ime?” 38 Pita agwa ha, sị: “Chegharịanụ,+ ka onye ọ bụla n’ime unu meekwa baptizim+ n’aha Jizọs Kraịst ka e wee gbaghara unu mmehie unu.+ Unu ga-anatakwa mmụọ nsọ Chineke na-enye n’efu. 39 N’ihi na ndị e kwere nkwa+ inye ya bụ ndị niile Jehova* Chineke anyị kpọrọ, ya bụ, unu na ụmụ unu na ndị niile nọ n’ebe dị anya.”+ 40 O kwuru ọtụtụ ihe ndị ọzọ, ziekwa ha ozi ọma nke ọma. Ọ gbakwara ha ume, sị: “Bụrụnụ ndị a ga-azọpụta n’ọgbọ a jọgburu onwe ya.”+ 41 E mere ndị ji obi ha niile nabata okwu ya baptizim.+ N’ụbọchị ahụ, ihe dị ka puku mmadụ* atọ (3,000) ghọrọ ndị na-eso ụzọ Jizọs.+ 42 Ha nọkwa na-ege ntị n’ihe ndịozi na-akụzi, na-anọkọ, na-erikọ nri,+ na-ekpekọkwa ekpere.+ 43 Ndịozi malitekwara ịrụ ọtụtụ ọrụ ebube. Mmadụ niile* hụkwara ihe a ma bido ịtụ egwu Chineke.+ 44 Ndị niile ghọrọ ndị na-eso ụzọ Jizọs na-anọkọ, na-ekerịtakwa ihe niile ha nwere. 45 Ha na-erekwa ala na ihe ndị ha nwere+ ma na-ekere mmadụ niile ego ha retere, onye ọ bụla enweta ego ọ ga-eji gboo mkpa ya.+ 46 N’ụbọchị ọ bụla, ha na-eji otu obi anọkọ mgbe niile n’ụlọ nsọ. Ha na-eji obi ọcha eri ihe n’ụlọ ibe ha, na-enwekwa ezigbo aṅụrị, 47 na-eto Chineke, ihe ha na-amasịkwa mmadụ niile. N’ụbọchị ọ bụla, Jehova* na-eme ka a na-enwekwu ndị na-eso ụzọ Jizọs a ga-azọpụta.+
^ Ma ọ bụ “asụsụ ọ na-asụ kemgbe a mụrụ ya.”
^ Na Grik, “ndị a tọghatara atọghata.”
^ Ma ọ bụ “Mmanya ọhụrụ.”
^ Na Grik, “Anụ ahụ́ m.”
^ Na Grik, “onye si ná mkpụrụ nke úkwù ya.”